Laga bilaabo Noofambar 1, 2019
Ku soo dhawoow mareegtan Tirinta daqiiqadaha yar. Markaad booqato ama si kale u isticmaasho degelkan ("Goobta"), waxaad ogolaatay Shuruudaha Isticmaalka ee soo socda. Shuruudahani waa heshiis sharci ah oo u dhexeeya adiga iyo HealthPartners, Inc. Adigoo isticmaalaya boggan, waxaad ogolaatay inaad u hoggaansanto oo aad ku xidho Shuruudaha Isticmaalka. Shuruucdu waxay dhaqan gelayaan taariikhda sare lagu muujiyey waxaana laga yaabaa inay is beddeleen tan iyo markii ugu dambaysay ee aad booqatay Goobta. Fadlan si taxadar leh u akhri shuruudaha iyo shuruudaha isticmaalka ka hor inta aanad isticmaalin goobta.
Aqbalaadda Siyaasaddayada Qarsoonnimada
Markaad ogolaato Shuruudaha Isticmaalka, waxaad ogolaatay shuruudaha Mareegtayada Siyaasadda Qarsoonnimada . Kahor intaadan isticmaalin boggan, fadlan dib u eeg boggayaga Siyaasadda Qarsoonaanta. Macluumaad kasta oo gaar ah, oo ay ku jiraan macluumaadka caafimaadka, aad na siiso natiijada isticmaalkaaga boggan waxaa loo maarayn doonaa si waafaqsan dukumentiyadan.
Lahaanshaha goobta iyo sii haysashada xuquuqda
Boggaan waxaa iska leh oo ay maamusho HealthPartners, Inc., ama mid ka mid ah kuwa raacsan, kuwa hoos yimaada, ama ururada kale ee la xiriira. HealthPartners waxay xafidaan dhammaan xuquuqda goobta marka laga reebo kuwa aan si gaar ah kuugu siinay Shuruudaha Isticmaalka.
Isbeddellada Shuruudaha Isticmaalka
Waxaan xaq u leenahay inaan bedelno Shuruudaha Isticmaalka wakhti kasta. Isbeddel kastaa wuu taabbagalayaa isla marka aanu ku dhajino bogga. Waxaan ku dhejin doonaa taariikhda isbeddelka ugu dambeeyay xagga sare ee bogga Shuruudaha Isticmaalka. Haddii aad isticmaasho Bogga ka dib isbeddelka la dhejiyo, waxaa laguu tixgelinayaa inaad aqbashay isbeddelada. Waa inaad booqataa oo aad dib u akhridaa Shuruudaha Isticmaalka inta badan si aad ula socoto waxa ay sheegayaan.
Oggolaanshahaaga heshiisyada kale
Si aad isu diiwaangeliso si aad u isticmaasho sifooyin gaar ah oo kala duwan ama meelaha sirta ah lagu ilaaliyo, haddii ay jiraan, boggan, waxa laga yaabaa inaad ogolaato shuruuc dheeraad ah ama shuruudo kale. Xaaladahan oo kale, waxa laga yaabaa inaan ku waydiino inaad si cad u ogolaato sharciyadaas dheeraadka ah ama shuruudaha, tusaale ahaan, calaamadaynta sanduuq ama dhagsii badhanka "Waan aqbalay". Nooca heshiiska waxaa loo yaqaan "heshiiska guji-ku-gudbinta."
Haddii mid ka mid ah shuruudaha heshiiska gujinta uu ka duwan yahay shuruudaha Shuruudaha Isticmaalka Mareegaha, shuruudaha heshiiska gujinta ayaa ku dari doona ama bedeli doona Shuruudahan iyada oo la tixgelinayo arrimaha lagu maamulo heshiiska guji-ku gudubka .
Ma jirto Talo Caafimaad
Macluumaadka aan ku bixinno bogga waxaa loogu talagalay ujeeddooyin waxbarasho oo guud oo looguma talagelin inay noqoto talo caafimaad adiga ama qof kale. Waa inaad had iyo jeer kala tashataa bixiyahaaga caafimaadka su'aalaha ku saabsan caafimaadkaaga iyo caafimaadka oo waligaa ha isku hallayn kan ama mareegaha kale kaligiis si aad u gaadho go'aano caafimaad.
Si gaar ah uguma talagelinay inaad wax ka turjunto boggan sida u doodista is-maamulka caafimaadkaaga ama xaaladdaada caafimaad ama loo isticmaalo beddelka talobixin caafimaad oo xirfad leh.
Weligaa ha daahin inaad raadsato talo caafimaad hana iska indhatirin talo kasta oo caafimaad oo aad ka heshay bixiyahaaga wax kasta oo aad ka akhriday bogga.
Xuquuqda daabacaadda iyo hantida garaadka
HealthPartners ayaa leh, ama haysta shatiga lagu isticmaalo, xuquuqda daabacaada iyo hantida kale ee garaadka ee Mawduuca Bogga. ("Content" waxaa ku jira qoraal, garaafyo, sawirro, iyo walxo kale, oo ay ku jiraan software kasta oo kuu ogolaanaya inaad booqato ama isticmaasho Bogga aan horumarinay ama aad haysato shatiga sharciga ah oo aad isticmaasho). Adiga ama qof kale midna ma haysto ama ma helaysid wax xuquuq ah, cinwaan ama xiiso iyo nuxurka adigoo si fudud u booqanaya ama isticmaalaya bogga.
Haddi nuxurku jebiyo xuquuqda daabacaada
Marka loo eego shuruudaha Xeerka Xuquuqda Daabacaadda Kun-sannadda Dijital ah, haddii aad soo dirto "Wakiilka la magacaabay" (hoos ka muuqda) ogaysiis ah in Macluumaadka ku jira Boggeena uu ku xad-gudbo xuquuqda daabacaada, waxaanu isla markiiba meesha ka saari doonaa ama joojin doonaa gelitaanka Macluumaadka ku xadgudubka.
Ogeysiiska ujeedadan waa inuu ka kooban yahay dhammaan macluumaadka soo socda:
Saxeexa jirka ama elektarooniga ah ee qofka loo oggolaaday inuu u dhaqmo magaca mulkiilaha xuquuqda aad aaminsan tahay in lagu xadgudbay;
Aqoonsiga shaqada xuquuqda daabacaada ee aad aaminsantahay in lagu xadgudbay;
Sharaxaad ku saabsan Mawduuca aad aaminsan tahay inuu xad-gudbaynayo oo ay tahay in meesha laga saaro;
Macluumaad ku filan si aan u helno waxa ku xad-gudbay Boggayaga;
Macluumaad ku filan si aan kula soo xiriirno, oo ay ku jiraan magacaaga, cinwaankaaga, iyo lambarka taleefanka iyo ciwaanka iimaylka (ama labadaba);
Bayaan aad aaminsan tahay si daacad ah oo u adeegsiga walxaha qaabka laga cawday ma oggola milkiilaha xuquuqda daabacaada, wakiilkiisa, ama sharciga; iyo
Bayaan sheegaya in xogta ku jirta ogaysiiskaagu ay tahay mid sax ah, oo hoos imanaysa ciqaabta been-abuurka, in dhinaca cabashada loo oggolaaday in uu ku dhaqmo magaca mulkiilaha xuquuq gaar ah oo lagu eedeeyay in lagu xadgudbay.
Markaan helno ogeysiis wata macluumaadkan, waxaan meesha ka saareynaa ama joojineynaa gelitaanka Mawduuca laga hadlayo.
Waxa aanu ogaysiin doonaa halka laga keenay nuxurka jabinta ee cabashadaada iyo ficiladayada. Xaaladaha qaarkood, haddii isha nuxurku ay na siiso macluumaad dheeraad ah oo nagu qanciya in nuxurka aan la saarin, waxaa laga yaabaa inaan dib u soo celinno.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad la tashato qareen ka hor intaadan xerin ogeysiis ama ka jawaabin ogeysiis uu qof kale soo gudbiyay.
U dir ogeysiiska wakiilkayaga la magacaabay:
Wakhtiyada Yaryar ee Ololaha HealthPartners, Inc.
(Ma aqbali karno lifaaqyada iimaylka. Fadlan ku dar dhammaan macluumaadka loo baahan yahay ee ku jira jidhka iimaylka. Haddii aad lifaaq ku soo lifaaqdo, waxa laga yaabaa inaanan helin ogeysiiska mana socodsiin doono.)
Xayiraadaha Isticmaalka boggan iyo waxa ku jira
Waxaad arki kartaa ama kala soo bixi kartaa nuqullada walxaha ku yaal bogga kaliya isticmaalkaaga gaarka ah. Waxaa laga yaabaa inaadan-iyo adigoo og inaadan u oggolaan qof kale inuu sameeyo mid ka mid ah waxyaabaha soo socda:
(1) U isticmaal bogga ujeeddooyin ganacsi (lacag-samayn) ama haddii kale u isticmaal bogga faa'iidada cid kasta oo aan adiga ama annaga ahayn, iyada oo aan oggolaansho qoran laga helin HealthPartners, Inc.
(2) U isticmaal boggan ujeedo kasta oo sharci darro ah ama si aad ugu gudbiso wax aan sharci ahayn, fisqi ah, sumcad dil, hanjabaad, dhibaatayn, aflagaado, cay, nacayb, ama ceebayn qof kale.
(3) Soo rar ama gudbi war kasta ama xog kasta oo ku xad-gudbi karta ama ku xad-gudbi karta xuquuqda qof kale.
(4) Dib u rogida injineerka ama isku day inaad ogaato fikradaha hoose, koodhka isha, hababka, farsamooyinka, tignoolajiyada, naqshadaynta, caanaha, injineernimada, ama algorithms ee Bogga.
(5) Dib-u-injineer-ka-noqoshada, kala-saar, kala-buri, dib-u-dejin, qor, u turjumi luqad kasta ama luuqad kasta oo kombuyuutar, dib-u-gudbi nooc kasta ha noqotee, dib u iibiso, ama qaybiso nuxurka annagoo ogolaansho qoraal ah naga haysan.
(6) Isku day in aad damiso, "jabsato", ama haddii kale aad farageliso shaqada saxda ah ee Boggaan.
Magacyada ganacsiga, calaamadaha ganacsiga, calaamadaha adeega, calaamadaha iyo halkudhigyada ("Calamadaha") ee ku jira Boggu waxa iska leh HealthPartners, la-hawlgalayaasheeda iyo xidhiidhiyaheeda, ama qolo kale oo aanu u ogolaanay inay calaamadeeda ku dhejiso Boggayaga. Laguuma oggola inaad u isticmaasho calaamadda xayaysiis kasta, xayaysiis, ama qaab ganacsi oo kale adiga oo aan ogolaansho qoran ka hor helin mulkiilaha calaamada.
Muujinta calaamada qof kale macnaheedu maaha in aanu taageerno, kafaala qaadno, ama aanu ku talino wax soo saarka xisbiga, adeegga, ama habka.
Xiriirinta Goobaha Kale
Bogga iyo waxa ku jira waxa laga yaabaa inay lahaadaan xidhiidho mareegaha ay maamulaan qolo saddexaad. Waxaan u bixinaa isku xirka si ay ugu habboonaato iyo tixraac kaliya ee ma ahan sababtoo ah waxaan taageernay waxa ku jira mareegaha qof kale. Ma dammaanad qaadi karno saxnaanta xog kasta ama agab kasta oo ku jira mareegaha kale.
In kasta oo aan isku dayeyno in aan u ilaalino Mawduuca ku yaal bogga sida ugu macquulsan, ma awoodno mana dammaanad qaadi karno isku halaynta, saxnaanta, dhammaystirnaanta, ama ku habboonaanta macluumaad kasta ama Macluumaadka ku jira bogga (oo ay ku jiraan isku xirka goobaha kale ee ay maamulaan dhinacyo saddexaad).
Ma samayno wax ballanqaad ah oo ku saabsan natiijooyinka laga yaabo in laga helo isticmaalka waxyaabaha ku jira bogga. Adiga, sidaa darteed, waxaad isticmaashaa waxa ku jira bogga khatartaada.
Macluumaadka iyo waxa ku jira bogga waxa lagu bixiyaa SIDA AAN AAN SHARCIGANAYN NOOC KASTA, OO AAN AFEEFAYNAA SHARCIYEYNTA SHEEGTA IYO SHARCIGA AH, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, DAmmaanadaha baayacmushtariga ah, FAYMIDKA MAQAL GAAR AH IYO MAS'UUL AH
Mas'uul kama nihin wax kasta oo dib u dhac ah, khalad ah, qalad ama ka-tagnaan la'aan ah oo ku saabsan Bogga ama gudbinta ama gaarsiinta dhammaan ama qayb ka mid ah, ama waxyeello kasta ama natiijooyinka ka soo baxa isticmaalkaaga bogga.
Sharciga lagu maamulayo iyo Madasha Khilaafaadka
Goobtani waxay ku taal Gobolka Minnesota. Jiritaanka Bogga iyo xaqiiqda ah inaad meel kasta ka heli karto maaha mid loogu talagalay mana aha in loo fasirto in aan ganacsi ka wadno dhammaan gobollada Mareykanka. Midna ma oggolaanno mana u gudbinno awoodda shakhsi ahaaneed ee maxkamadaha gobolka ama federaalka ee gobol kasta oo Mareykanka ah, marka laga reebo Gobolka Minnesota. Adigoo isticmaalaya Boggayaga, waxaad ogolaatay in dacwad kasta ama fal kasta oo si toos ah ama si dadban uga dhasha isticmaalka Bogga lagu macneeyo dhammaan dhinacyada sharciyada Gobolka Minnesota, marka laga reebo doorashada sharciga ama qodobbada sharciga khilaafsan.
Waxaad u diri kartaa su'aalo ama walaac ku saabsan Shuruudaha Isticmaalka littlemomentscount@healthpartners.com ama qoraal ahaan:
8170 33aad Ave. S.
Fiiro gaar ah: Ololaha Tirinta Daqiiqado Yaryar